Orinasa maro kokoa no mampiasa teknolojia hanaraha-maso ireo mpiasa - Vahaolana OMG
Orinasa maromaro no mampiasa teknolojia hanaraha-maso ireo mpiasa
Ny fanaraha-maso ny mpiasa dia ny fampiasana teknika isan-karazany any amin'ny birao, ary toeram-piasana hafa mba hanangonana vaovao momba ny hetsika sy ny toeran'ireo mpiasa. Orinasa maromaro kokoa no mampiasa ny teknolojia farany hanara-maso ireo mpiasa hanatsarana ny vokatra sy miaro ny harena amin'ny orinasa. Ny tanjona lehibe dia ny hisorohana ny fihetsika tsy ekena amin'ny toeram-piasana.
International Data Corp (IDC) dia nanao fikarohana momba ny toeram-piasana ary nitatitra fa tsy misy ifandraisany ny 30 ka 40 isan-jaton'ny ora fidirana amin'ny Internet. Ny antontan'isa hafa dia manambara fa ny 21 amin'ny 31 isan-jaton'ny mpiasa dia nandefa mailaka nanambara fampahalalana momba ny varotra toy ny tsiambaratelon'ny varotra, tsiambaratelo ara-tsaina, ivelan'ny tambajotra orinasa; 60% amin'ny tsena rehetra an-tserasera dia atao mandritra ny ora fiasana. Any Etazonia, ny famoizana isan-taona amin'ny famoahana volamena an-tserasera dia tombanana amin'ny 40%.
Ny fomba fanaraha-maso dia misy ny fakan-tsary miafina, ny fandraisam-peo amin'ny feo, ny fanaraha-maso GPS, ny famoronana Keystroke, ny fidirana an-trano ary ny fanaraha-maso amin'ny Internet izay ahitana ny fanaraha-maso ny fidiran'ny tranokalan'ny mpiasa, ny fandefasana hafatra haingana, ny mailaka ary ny fifaneraserana amin'ny tranokalan'ny Social Networking.
Ny antony iray lehibe amin'ny fanaraha-maso ny mpiasa amin'ny alàlan'ny teknolojia farany dia ny famerana azy ireo hampiasa ny fitaovana mety ho azy manokana. Ara-dalàna ho an'ny mpampiasa ny mijery ny fampiasana ny finday finday, solosaina finday, solosaina ary fitaovana hafa mandritra ny fandefasana adidy. Miteraka romotra ny olana ara-dalàna rehefa hitan'ny tompona orinasa ny mpiasa mampiasa orinasa fitaovana ivelan'ny ora fiasana na mampiasa ny fitaovana ampiasainy mandritra ny ora fiasana.
Alohan'ny hametrahanao ny programa fanaraha-maso ny mpiasa dia tokony hainao ny manazava ny fanekena azo ekena sy tsy ekena mandritra ny ora fiasa ary manangana drafitra fampiasa azo ekena ho azo ekena izay tsy maintsy eken'ny mpiasa. Manana fitaovana manana kilasy manerantany izahay hanaraha-maso ireo mpiasa. Raha mila fanazavana fanampiny kitiho eto.
Orinasa maro kokoa no mampiasa teknolojia hanaraha-maso ireo mpiasa:
Ny fakantsary miafina, Trackers GPS ary fampandrenesana feo no fitaovana izay manambara amin'ny vanim-potoana vaovao amin'ny mpiasa iray mifandray, saingy ny sasany amin'ireo manampahaizana dia nilaza fa ireo teknolojia ireo dia mampamora ny fiainana manokana ho an'ny mpiasa.
Ohatra, ny antontan-taratasy ofisialy vao haingana natolotry ny goavambe teknolojia dia mampiseho sary fakantsary miafina, Voice Recorder ary GPS Trackers izay afaka mijery ny asan'ny mpiasa. Orinasa teknolojia iray lehibe miorina amin'ny Wisconsin Three Square Market no nanomboka fandaharana fakantsary miafina ho an'ny mpiasa ao amin'ny Jolay 2017. Ny UPS dia manana sensors amin'ny kamiao fitaterana azy hanara-maso ny fisokafana sy ny fanakatonana ny varavarana, ny masin'ilay fiara, ary na ny fehikibo seza dia nohidiana.
Sam Bengston, injeniera rindrambaiko iray ao amin'ny tsenan'ny Three Square, dia nilaza tamim-pahazotoana hientana amin'ny microchip.
Tsy nieritreritra ny tsy hanao izany akory aza izy? hoy ihany izy fa nampiasa ny sombin-tariby hanakodia ao anaty efitrano azo antoka ary miditra ao amin'ny solosainany. Fotoana tsara sy tsara izany. Ireo fanavaozana ireo dia afaka mampifangaro ny tsipika eo amin'ny risika fiarovana sy ny vokatra tsara kokoa
Andriamatoa Daniel Ives mpandinika ny indostrian'ny teknolojia avy amin'ny GBH Insights dia nilaza fa manerana ny orinasa, manerana an'izao tontolo izao, ny mpampiasa dia mitady mpiasa miasa bebe kokoa. Ny orinasam-pifandraisana lehibe dia mitady fomba hanomezana lanja ny mpampiasa sy ny fampahalalana ny angona momba ny asany sy ny mpiasa.
Saingy ireo hevitra ireo dia mety hitranga aorian'ny fandikana ny tsiambaratelon'ny mpiasa.
Ives dia nilaza fa avy amin'ny mpiasa iray sy ny fijerin'ny angon-drakitra manokana manokana dia tena zava-dehibe io fampahalalana io. Raha tonga any an-tànan'ny diso io fampahalalana io, tsy hafa izany amin'ny fanitsakitsahana fiarovana lehibe.
Paula Branter mpanolotsaina zokiolona ao amin'ny Workplace Fairness, fikambanana misahana ny fanabeazam-pirenena sy fikambanana mpiaro tombontsoa izay miasa mba hitazomana sy hiambenana ny zon'ny mpiasa dia nilaza hoe: "Tsy takatry ny olona fa tsy be ny lalàna miaro ny tsiambaratelo ao amin'ny toeram-piasana. Ny ampahany amin'ny ahiahy dia ny mpikambana ao amin'ny mpiasa mety tsy ho mailo akory amin'ny fomba fanarahana ny angon-drakitra rehetra sy ny fomba fampiasana izany.
Ny orinasa dia mitazona ny mpiasany amin'ny fiambenana akaiky kokoa mba hitsara ny zava-bitan'izy ireo ary hanamafisana ny fahombiazan'ny orinasany rehefa avy nanangona ny angon-drakitra rehetra momba ny asan'ny mpiasa. Ny teknolojia maoderina dia manome fitaovana ho an'ny tompon'ny orinasa sy ny orinasa handehanana lavitra mihoatra ny fitaovana amin'ny vanin-taona farany / amin'ny famantaranandro tsy misy farany.
Notaterin'ny CBS fa orinasa maro no manara-maso ny mpiasa amin'ny alàlan'ny fampiharana amin'ny finday, fakantsary miafina, fakana feo, GPS Tracking. Rehefa mivoaka avy ao izy ireo dia mety hahafantatra ny toerana misy azy ireo. Notaterin'ny TV bebe kokoa fa ny orinasa sasany dia manara-maso fatratra ny tranonkala rehetra ataon'ireo mpiasan'ny tranokala, isaky ny mandondona azy ireo.
Matetika, ny mpitantana dia mampiasa ny teknolojia hitsarana ny famokaran'ny mpiasa, manampy ny mpiasa hifantoka sy handrefy ny fomba andaniany ny fotoanany amin'ny famantaranandro. Betsaka ny mpiasa no mandany fotoana amin'ny fomba maro toy izany mpiasa mpiasa amin'ny orinasa maro tara tara, miala maraina na milalao lalao nofinofy na lalao computer hafa amin'ny solosain'izy ireo tontolo andro fa tsy manome lanja ny asany. Ka ny teknolojia farany farany no vahaolana tsara indrindra hijeren'ireo mpampiasa ny asan'ny mpiasan'ny birao sy ny mpiasa hafa.
Ny vokatra fanaraha-maso kalitao dia azo atokisana tsara hanaraha-maso ny asan'ny mpiasa. Tsidiho azafady ny tranokalanay ho an'ny fitaovana fanaraha-maso anay.
Mpiasa iray any California no nalain'ny fakantsary miafina fa izy dia nanararaotra ny PC an'ny orinasa ary nandaniany ny fotoan'ny fandaminana tamin'ny filalaovana lalao amin'ny fotoana fiasana. Ny hetsika toy izany dia ho tsikaritry ny fampiasana ny haitao farany.
Betsaka ny demerits sy negativities amin'ny fampiasana zavatra toy izany. Ny tena lesoka sy ny zavatra tsy eritreretiko fa noeritreretintsika dia ny miova amin'ny toekarena amerikana dia ny masinina sy ny robot manala asa. Ary ny azon'ny olombelona atao indrindra dia ny mieritreritra artistika, mieritreritra eritreritra ivelan'ny boaty, mieritreritra zavatra tsy azon'ny masinina atao, mieritreritra zavatra tsy eritreretin'ny robot. Ary mba hanaovana izany dia mila fahalalahana ianao dia mila manana elastika.
Nilaza bebe kokoa ny CBS fa ny lahatsoratra New York Times farany izay nanadihady ny fomba fiasa sy ny fomba fitantanana any Amazon dia ho ohatra iray amin'ny fomba mety hanakorontanana ny mpiasa. Ny fantsom-pahitalavitra dia manondro endrika ratsy iray hafa amin'ny fanaraha-maso ny mpiasa izay apetrany, izay ampiasain'ny teknolojia farany fanaraha-maso farany, dia mety hitarika fahasambarana mba tsy hahafantaran'ny mpitantana izany. Ny orinasa hafa toa an'i Netflix sy Google dia manohy sekoly mieritreritra kokoa. Manome fialan-tsasatra ny Netflix isaky ny maniry ianao raha manana politikany milamina i Google momba ny fomba andanianao ny fotoana; mampirisika ny olona manonofy izy ireo.
Ahoana ny asan'ny fakantsary miafina, ny fahazoana feo ary ny fanaraha-maso GPS:
Ny fakantsary miafina dia ampiasain'ny bateria; maro tokoa no ilaina dia tsy mifamatotra mihidy amin'ny rindrina na raha tsy izany dia miraikitra amin'ny rafitry ny herinaratra. Mampiasa fifandraisana an-tariby izy ireo, na izany aza, izay midika fa tsy mila mampiasa tariby ianao avy amin'ny fakan-tsary mankany amin'ny mpandray. Mety hahatonga azy ireo mety kokoa hampiasaina kokoa ary mora kokoa ny manafina.
Tonga amin'ny endrika roa ny Recorder feo feo avo lenta; rakitsoratra voatokana izay natao indrindra handrenesana feo sy feo hafa na apetraka miorina amin'ny finday avo lenta. Na izany aza, amin'ny fanamafisam-peo amin'ny fitaovana fanamafisam-peo efa misy, dia afaka mandefa feo avy amina haino aman-jery maro hafa sy fitaovana fandraketana an-tsoratra ihany koa ianao.
Misy tambajotra eran-tany, satellita 30 amin'ny haavon'ny 20,000 kilometatra miala ny orbiting azy, antsoina hoe The Global Positioning System (GPS). Taloha, dia natao manokana ho an'ny tafika amerikanina any Etazonia fa ankehitriny misy afaka mandray soa avy amin'izany. Solontena GPS iray finday na telefaona afaka manangona ireo onjam-peo fampielezana ny satelita.
Ahoana ny fanaraha-maso ataon'ny orinasa ny mpiasa:
Ny mpampiasa dia afaka manangana fakantsary horonantsary hamakiana mailaka, mailaka mailaka ary mijery ny fampiasana solosaina sy telefaona. Mampiasa GPS Tracking ny orinasa hanaraha-maso ny mpiasa ao amin'ny toeram-piasan'izy ireo.
Ny ohatra dia miasa feno ohatra fa amin'ny lafiny sasany hamaha ny fivoaran'ny asanao. Toy ny mpiasa amin'ny serivisy famokarana izay nanery ny hiasa amin'ny haingam-pandeha haingana sy ny foibe antso izay manara-maso ny halavan'ny fotoana ao amin'ny telefaona. Ny mpampiasa sy ny Bosses amin'ny orinasa sy orinasa dia miditra amin'ny mailaka sy ny solosaina orinasa ihany koa.
Matetika ny orinasa teknolojia lehibe dia mangataka pataloha tentative, ary tsy azo inoana fa ny fanarahan-dia maka endrika vaovao.
Manaiky ny teknolojia fanaraha-maso ny mpiasa:
Ny fanekena ny fidiran'ny tsiambaratelo amin'ny lafiny iray dia nitombo hatrany amin'ny ampahany amin'ny asa. Ny olona dia manaiky fotsiny io fironana io ho zavatra tokony hataony hitazomana ny asany. Raha atao amin'ny teny hafa, very amin'ny ady izany hoy ny manam-pahaizana sasany. Paula Branter, mpanolotsaina zokiolona ao amin'ny Workplace Fairness dia nanamarika fa efa angonina sahady efa angonina ny momba ny asan'ny olona ary voatahiry ao anaty fepetra tsy fantatra. Amin'ny tranga sasany dia misafidy ny hojerena ny mpiasa.
Maherin'ny 45 amin'ny 80 mpiasan'ny tsena telo Square dia nanaiky hanana GPS Tracker. Nilaza ny Tale Jeneralin'ny orinasa, Todd Westby, miaraka amin'ny fandrosoana ny Teknolojia momba ny Global Positioning System, ny mpampiasa dia mahazo fidirana miavaka amin'ny toerana misy ny mpiasa. Nandritra ny taona maro dia maro ny orinasa any Etazonia no afaka nanara-maso ny findain'izy ireo na ny mpiasan'ny tanimbary na aiza na aiza amin'ny alàlan'ny fitaovana GPS ao anaty fiara. Miaraka amin'ny teknolojia vao haingana, ny orinasa dia afaka manara-maso izay misy amin'ny alàlan'ny rindranasa Global Positioning System amin'ny telefaona-pandehan'ny orinasa Bosses. Saingy ny fanaraha-maso dia manambara ny fandrahonana tokony ho takatry ny mpampiasa mba hahafahany maminavina raha ny tombontsoa tsy an-kiato no mahatonga ny fandrahonana lehibe. Ny fanaraha-maso ny toeran'ny mpiasa sy ny asa amin'ny alàlan'ny rafitra Global Positioning System dia mety hahazo tombontsoa maro ho an'ny orinasa. Ho fahazoana ny tombotsoan'ity teknolojia farany ity amin'ny fampitomboana ny fahombiazan'ny orinasanao dia azonao atao ny mahatoky ny vokatra momba ny kalitao. Tsidiho ny tranokalanay ary jereo ny antsipirian'ny vokatra momba ny kalitao.
Ny orinasa dia mandray ny tombony manaraka amin'ny fanaraha-maso:
Ny fanaraha-maso ny mpiasa dia toa tsy atokisan'ny fikambanana ny mpiasa ao aminy. Na izany aza, tombony be dia be no tonga miaraka amin'ny fametrahana fitaovana fanaraha-maso ao amin'ny orinasanao. Ny sasany amin'ireo tombony ireo dia tsy tombony ho an'ny orinasa akory fa tombony ho an'ny mpiasa ihany. Ny lehiben'ny orinasa iray dia tsy afaka manara-maso ny mpiasany foana. Ny tanjona ao ambadik'ireo mpiasa mpanara-maso dia ny hampahafantatra amin'ny mpampiasa ny zava-mitranga amin'ny orinasanao amin'ny fotoana tsy misy anao.
Rehefa misy maso maso manara-maso ny mpiasa ao amin'ny orinasa iray ny orinasa iray dia afaka misintona hadisoana na fahadisoana mety hitranga ao amin'ny toeram-piasana ny andro. Isaky ny manamarika mpiasa iray manao fahadisoana ianao, dia afaka mifandray aminy avy hatrany, fantaro ny fahadisoany, ary manery azy hanitsy ilay lesoka eo an-toerana. Etsy andaniny, azonao atao ny manamarika an'ity traikefa ity ary atolotra izany eo alohan'ny mpiasa amin'ny fotoana ho toy ny fizahana ny fanatanterahana.
Mampiasa ny teknolojia ny orinasa hanara-maso ny mpiasa hanatsarana ny fifandraisan'ny mpampiasa. Azonao atao ny manamarika ny fahadisoan'ny mpiasa fa tsy manondro azy avy hatrany dia azonao atao ny miresaka momba azy ireo amin'ny fotoana mety. Ny fahazarana misambotra mpiasa tsy mety dia mety miteraka tahotra sy tsy manandevo ary ny mpiasa dia lasa tsy mahazo aina sy manahy ny amin'ny fanaovana fahadisoana. Mety hampihena ny vokatra entin'ny mpiasa iray izany.
Ny mpiasa an-tsitrapo na tsy an-tsitrapo dia mety hanitsakitsaka ny fitsipika fiarovana izay mety manimba azy ireo ary naratra mafy. Amin'ny alàlan'ny fananana rafitra fanaraha-maso, ny tompon'andraikitra dia afaka manara-maso ny olana momba ny fiarovana mitranga, ao anatin'izany ny loza mety hitranga amin'ny gorodona na eny ambonin'izy ireo, indrindra ho an'ny atmosfera miasa ho an'ny loza azo antoka, toy ny trano fitehirizana sy toeram-panorenana.
Azonao atao ny manisy marika ny mpikambana momba ny fanitsakitsahana ny politikan'ny orinasa Hisy mpiasa mamitaka foana - indrindra fa raha manana orinasa lehibe manana mpiasa maro ianao. Amin'ity ohatra ity, dia azonao atao ny misambotra ireo mpiasa ireo izay matetika mino fa diso noho ny fitsipika izy ireo. Te-hisambotra azy ireo amin'ny hetsika manitsakitsaka ny politikan'ny orinasa ianao amin'ny tsy fisian'ny fitantanana. Amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso azy ireo dia mety hahazo misambotra ireo mpiasa voarohirohy ianao ary mampihatra ny fepetra mifehy ny famaizana.
Ny tombony iray hafa izay mahatonga ny orinasa hampiasa ny teknolojia farany ny fanaraha-maso dia fanatsarana ny vidin'ny famokarana. Ny fomba ampiasain'ny mpiasa iray mandany ny fotoanany ao amin'ny birao dia misy fiantraikany lehibe amin'ny vokatra vokarin'ny orinasa iray manontolo. Amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso ny mpiasa dia afaka mahita izay ataon'izy ireo amin'ny fotoanany ianao, izay manampy anao hiasa ireo fomba ahafahanao manao ny mpikambana ao aminao - ary ny birao amin'ny ankapobeny - mahomby kokoa. Ho an'ny vokatra fanaraha-maso mitsidika ny tranokalantsika.
7405 Total Views 1 Views Today